Ikea စပီကာများ၊ Mac ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၏ အရေးပါမှုနှင့် အခြားအရာများ။ Mac မှနေ၍ တစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး ငါ mac ကပါ။
ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များအတွက် ရက်အတော်ကြာ အနားယူပြီးနောက် ယခုတစ်ပတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး Apple ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများနှင့် စွမ်းအင်အပြည့်ဖြင့် အမြဲလိုလို ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ လိုချင်တယ်။ အားလုံးပဲ နှစ်သစ်ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ နေ့တိုင်း၊ ဝဘ်ပေါ်ရှိ၊ မတူညီသောလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့် Actualidad iPhone အဖွဲ့နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည့် Apple ပေါ့တ်ကာစ်တွင် သင်ရှိနေပါသည်။
2022 ခုနှစ် နှစ်သစ်ရဲ့ ဒုတိယပတ်မှာ Apple ထုတ်ကုန်တွေအကြောင်း ကောလာဟလတွေနဲ့ သတင်းတွေက ရပ်တန့်မသွားဘဲ ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အားလုံးကို မျှဝေပေးချင်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းအချို့လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် I'm from Mac ရဲ့ ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ပေါ်လွင်ချက်များကို ကြည့်ရအောင်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် Ikea ၏သတင်းနှင့်၎င်း၏အသစ်နှင့်စတင်သည်။ AirPlay2နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော စာအုပ်စင်စပီကာများ. ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည် ဤအပိုင်းရှိ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်စေသော စပီကာများ၏ ပြီးပြည့်စုံသောအပ်ဒိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Sonos နှင့် Ikea ဒီဇိုင်းလက်မှ ကောင်းမွန်သော အသံ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကို နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားရန် အရေးကြီးကြောင်း သတင်းများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် macOS Big Sur နှင့် macOS Monterey ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများ Apple မှ မကြာသေးမီကမှ ယခု နှင့် ယခု မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးပြဿနာအတွက် အဓိကဖြေရှင်းချက်။
ဒီတစ်ပတ်တော့ တချို့ပါ။ Apple ဝန်ဆောင်မှုများသည် နာရီအနည်းငယ်ကြာ အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။. ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် အချိန်အကြာကြီးမပေးခဲ့ပုံရသော်လည်း Apple အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း ချို့ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ချဲ့ထွင်ကာ ယခင်အချိန်များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတိုင်း မီဒီယာမျိုးစုံသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ လောလောဆယ်တော့ အရာအားလုံးက ပြင်ဆင်ပြီး ပြီးပြည့်စုံစွာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
ပြီးအောင် တော့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ သတင်း တွေ ကို မျှဝေ ချင် ပါတယ် Apple က ပြင်ပကုမ္ပဏီတွေကို ဝင်ငွေထုတ်ပေးပါတယ်။. TSMC ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီအချို့က ရယူသည်။ Cupertino ကုမ္ပဏီကို ကျေးဇူးတင်ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်အတွက် အံ့မခန်း အကျိုးအမြတ်တွေပါ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » Ikea စပီကာများ၊ Mac ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၏ အရေးပါမှုနှင့် အခြားအရာများ။ Mac မှ တစ်ပတ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။